September 3, 2021 September 3, 2021 N88LeaveaComment on बैरागीएर एमाले छाेडेका बामदेवकाे सांसद पद के हुन्छ अब ?
काठमाडौँ । वामदेव गौतमले एमाले छाडे पनि उनको सांसद पद नजाने भएको छ । गौतम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सांसद हुन् । ‘राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसदहरूले दल त्यागेमा उनीहरूको पद जान्छ तर गौतम दलबाट मनोनीत नभएका कारणले पार्टी छोडे पनि पद सुरक्षित रहन्छ’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा […]
‘एमसीसी’का विवाद बारे देउवा सरकारले अमेरिकालाई पठायाे यस्ताे पत्र, के छ खास पत्रमा ! पूरा पढ्नुस्
September 3, 2021 N88LeaveaComment on ‘एमसीसी’का विवाद बारे देउवा सरकारले अमेरिकालाई पठायाे यस्ताे पत्र, के छ खास पत्रमा ! पूरा पढ्नुस्
काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा उठिरहेका विवादित विषयहरुबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार एससीसीका विषयमा नेपालमा विभिन्न पक्षबाट उठाइएका विषयहरुलाई उतैबाट स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको हो । पत्रमा एमसीसी अमेरिकाले अघि […]
वामदेव गौतमले एमाले छाडे [राजीनामा पत्रसहित]
September 3, 2021 N88LeaveaComment on वामदेव गौतमले एमाले छाडे [राजीनामा पत्रसहित]
काठमाडौँ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले शुक्रबार कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामा‌ङलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछि नयाँ दलमा सहभागी हुने गरी पार्टी छोडेका हुन् । उनी एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट थिए । राजीनामा पत्रमा एमाले अध्यक्ष केपीको कार्यशैलीको आलोचना गरिएको छ […]
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले छाडे पार्टी, अबकाे यात्रा कता ?
September 3, 2021 N88LeaveaComment on एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले छाडे पार्टी, अबकाे यात्रा कता ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी परित्याग गरेका छन् । गौतमले एमालेको सबै पदबाट राजीनामा दिएको पत्र उनका स्वकीय सचिवमार्फत कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङलाई बुझाएका हुन् । ५ पुस २०७७ मा संसद विघटनसँगै साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजित हुँदा गौतमले एकता अभियान चलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा एमाले […]
प्रचण्डकी नातिनीले गाइन् हिन्दी गीत (भिडियाेसहित)
September 3, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डकी नातिनीले गाइन् हिन्दी गीत (भिडियाेसहित)
काठमाडाैं । नेपाली गायिका स्मीता दाहालले हिन्दी गीत गाएकी छन् । उनले ‘इबादाद बन गए हो’ बोलको हिन्दी गीत गाएकी हुन् । उक्त गीत गायनमा स्मीतालाई शबाब साबरीले स्वरमा साथ दिएका छन् । केआर वाहीको शब्द रहेको गीतमा शबाब साबरीले संगीत दिएका छन् । गीतको भिडियो पनि बनेको छ । जसमा गायिका स्मीताले भारतीय मोडल […]
September 3, 2021 N88LeaveaComment on कमेडी च्याम्पियन–२ बाट ऋचा शर्मा विदा
काठमाडौं । कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन–२’ नायिका ऋचा शर्मा बाहिरिएकी छिन् । आमा बन्ने मिति नजिकिएपछि उनले शो छोडेकी हुन् । उत्कृष्ट ३ प्रतियोगी छनौटसम्म निर्णायकको रुपमा रहेकी शर्मा फाइनल प्रतियोगितामा भने शोमा अब देखिने छैनिन् । ‘कमेडी च्याम्पियनको फाइनल अब दुई सातापछि हुनेछ । डाक्टर लगायत सबैले अब त रेस्ट गर्नुपर्छ भनेपछि शोका […]
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ठूलो मात्रामा कर्मचारी चाहियो, कसरी भर्ने फारम ? (सूचना हेर्नुस्)
September 3, 2021 September 3, 2021 N88LeaveaComment on नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ठूलो मात्रामा कर्मचारी चाहियो, कसरी भर्ने फारम ? (सूचना हेर्नुस्)
काठमाडौ । बेरोजगार र शिक्षित युवायुवतीहरुका लागि जागिरको अवसर खुलेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदपूर्तिका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामार्फत स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । इच्छुक ब्यक्तिहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेवसाइटमा गएर फाराम […]
नेपाली सेनामा भर्ती खुल्याे, कसरी दिने निवेदन ? (हेर्नुस् सूचना)
September 3, 2021 N88LeaveaComment on नेपाली सेनामा भर्ती खुल्याे, कसरी दिने निवेदन ? (हेर्नुस् सूचना)
काठमाडौ । नेपाली सेनाले ठूलो संख्यामा भर्ना खुलाएको छ । करिब ४ हजार रिक्त रहेको सैन्य पदमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयको कार्यरथी विभागले विभिन्न स्थानमा ४ हजार सङ्ख्यामा सैन्य पदको दरखास्त आह्वान गरेको हो । बहालवाला सैनिक व्यक्ति बाहेक सैन्य पदका उम्मेदवारहरूको हकमा […]
गोकुल बाँस्कोटाको क्षेत्रमा एमाले फेँदैबाट ढल्यो , नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले जमायाे पक्कड !
September 3, 2021 N88LeaveaComment on गोकुल बाँस्कोटाको क्षेत्रमा एमाले फेँदैबाट ढल्यो , नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले जमायाे पक्कड !
काठमाडाैं । माधव नेपालमाथि कडा शब्दमा आलोचना गर्दै आएका एमाले सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको निर्वाचन क्षेत्रका दुवै प्रदेश सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लागेका छन्। बाँस्कोटाको निर्वाचन क्षेत्र काभ्रे २ को प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र(१ का लक्ष्मण लम्साल र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र(२ का बसुन्धरा हुमागाईं दुवैले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा लम्सालले २७ हजार […]
प्यारी बुहारी बिना मगरलाई प्रचण्डले दिए फेरि त्यही मन्त्रालय !
September 3, 2021 N88LeaveaComment on प्यारी बुहारी बिना मगरलाई प्रचण्डले दिए फेरि त्यही मन्त्रालय !
काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि परिवारवाद रमाउने नेताको आरोप लाग्ने गरेको छ । पटकपटक आफ्नै परिवार र आफन्तलाई अवसर दिने गरेकाले उनीमाथि त्यस्तो आरोप लाग्दैं आएको हो । प्रचण्डले मन्त्री बन्नेहरु थुप्रै रहेकाले छनोट गर्न निकै गाह्रो भइरहेको बताउँदै आएका छन् । केही समयअघि पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा उनले ‘मेरो दिमागमा […]